ရှမ်းပြည်နယ်က လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး တာဝါတိုင်ကို တွေ့ရစဉ်
Photo: Kyaw Zin Than/RFA
မြန်မာနိုင်ငံက ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်၊ ပြင်သစ်ထံက မြန်မာကျပ်ငွေ ဘီလျံ ၆၀ ကျော်နဲ့ ညီမျှတဲ့ ယူရို ၃၅.၇ သန်းချေးယူဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို ပေးပို့တဲ့ စာချွန်လွှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီချေးငွေဟာ အတိုးဝ.၆၈%နဲ့ ၁၃နှစ်ချေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့ စီမံဘဏ္ဍာ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ဒီချေးငွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ ရဲတံခွန်၊ မုန်းချောင်း၊ ကင်းတား၊ဇောင်းတူနဲ့ သဖန်းဆိပ် စတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ယူနိုင်တဲ့ စက်ရုံတွေမှာ အကြီးစားပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ် အဆင့်မြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံတွေကို ပြင်ဆင်ပြီးချိန်မှာ လျှပ်စစ်ကီလိုဝပ်နာရီ ၅၆၅ သန်းကနေ ၆၄၆ သန်းအထိ ထုတ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
မီတာခလျှော့ချရေး ဖယောင်တိုင်ထွန်း လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ
နှစ်မကုန်ခင် လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်ချက် ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရည်မှန်း
လျှပ်စစ်မီတာခကိစ္စ ဆွေးနွေးအဖြေရှာနေတယ်လို့ ၀န်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းပြော
ဓါတ်ငွေ့သုံး စွမ်းအားစက်ရုံ တည်ဆောက်ရေး ထိုင်း ဆွေးနွေး
မီတာ ၄ မျိုးစနစ် ဧပြီမှာ စတင်မည်
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၂ ဆတိုးမည်
မီတာခတွေ ပြင်ဆင်ကောက်ခံဖို့ စီစဉ်နေကြောင်း ဒုဝန်ကြီး ပြော
Thanksalot to French Government for its loan to Myanmar asasupport of Electricity Supply improvement in the country. Yet, foreign experts are required for the technological and financial management. Or else, those money will be wasted - never beneficial to the country.
May 02, 2019 04:10 AM